Thandaza kwiRosari eNgcwele Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Ixesha losapho lubaluleke kakhulu kunye nokomoya, yiyo loo nto sikufundisa njalo thandaza u Ingcwele yeRosari ukuze wabelane ngayo nabantu obathandayo.
1 Kutheni kubalulekile ukuthandaza iRosari eNgcwele?
1.1 Imithandazo yeRosari eNgcwele
1.1.1 Inkolelo yabapostile
1.1.2 UPadre Nuestro
1.1.3 Ave uMariya
1.1.5 Umthandazo kaFatima
1.1.7 Umthandazo emva kweRosari
Kutheni kubalulekile ukuthandaza iRosari eNgcwele?
Lo ngumthandazo wamaKatolika oqhelekileyo owaziwa ngokuba yiRosary eNgcwele ngamaKatolika, ezibeka kwiqela lakhe lokufunda kunye nokusebenza kwalo rhoqo. Kwimvelaphi yayo, iirosari zamaKatolika zibandakanya amasiko amadala emithandazo evela eNtshona naseMpuma yamaKristu.
Irosari engcwele imele iiroses ezinikezelwa kwiNtombikazi enguMariya kwizigaba zayo zobomi, kwezinye iintsapho la mava okuthandaza njengentsapho namhlanje lisiko elihle, kwaye oku kuzisa izibonelelo ezifana nempumelelo, imali, impilo yengqondo, ukunceda ekuphuculeni abantu abagulayo, singasathethi ke ngokuhlalisana kusapho okungcono.
Kukho iindlela ezahlukeneyo zokuyithandaza, kuxhomekeka kwindlela yokucamngca eyahluka ngayo, imithandazo eyongezwayo xa uyithandaza kwanenkuthazo yomthandazo ngokwawo, ke lo mthandazo ubutshintshile iminyaka engekho ngaphantsi kwe-1200 yobukho Ilizwe ngalinye okanye isiko ngalinye liwutshintshile lo mthandazo, nangona bekukho utshintsho emthandazweni, bagqibe kwelokuba bagcine i-150 Hail Marys eneemfihlakalo ezili-15.
Yenziwe ngeemfihlakalo ezingamashumi amabini zobomi bukaYesu, irosari yokuqala ibandakanya iimfihlakalo zovuyo, ezikhanyayo, ezibuhlungu kunye neyesine eziyakuba zizezobuqaqawuli. Iqela ngalinye leemfihlakalo libandakanya imixholo emihlanu eyahlukeneyo yokucamngca kwaye nganye kuzo imele isiganeko ebomini uYesu awayenayo neNtombikazi enguMariya kwaye ke ngokwesiko irosari Inikezelwe kuthotho lweemfihlakalo ezintathu ngobusuku bonke.
Kusenokwenzeka ukuba iRosari yeyona ndlela iqhelekileyo yokuzinikela kwabo balandeli bathembekileyo, kuba baye baqaphela indlela ubomi babo obuye baphucuka ngayo ngokukodwa kwimisebenzi yabo emihle, ngaloo ndlela benika amava obunye apho wenziwa kuyo yonke indawo nezizathu zokudumisa nokubonga uThixo. ukuthanda uluntu.
Imithandazo yeRosari eNgcwele
Ukuthandaza i-rosari kunye nokucinga ngeemfihlakalo ezithiwe thaca kumzuzu othile, komeleza ukuqonda kwenkolo yamaKatolika, ke ngoko, kwizithethe zamaKatolika, xa kuthandazwa i-rosari, kunikezelwa umzuzu owodwa nobalulekileyo. Ibandakanya intando, kwaye iyasinceda ukukhetha okulungileyo okanye okubi, ikwasikhokelela kumzuzu woxolo xa sicamngca, eminye yemithandazo eyenziwayo yile:
Kuya kufuneka uqale ngalo mthandazo emva kokwenza umnqamlezo, "inkolo" ngomnye wemithandazo emidala, ukuze ubalise kwaye uxele inxenye yeemeko uYesu awadlula kuzo ebomini bakhe, lo mthandazo wenziwa uchaza enye yezinto awazenzayo uYesu de kwayimini yokufa kwakhe. Kufuneka uthandazwe ngokholo olukhulu, kuba uThixo umamela ngalinye lamagama esiwathandazayo nawuthandazayo, ngomnye wemithandazo ephambili.
Umthandazo wokuqala owanikwa nguThixo ebantwini kwaye, uthathelwa ingqalelo ngabanye, njengowona mthandazo uthandwayo kwaye uhlukile, owafundiswa nguYesu Krestu ngokwakhe kuthi kubantakwabo, ukuze unxibelelane notata wethu uThixo. Sisibhengezo, apho sithi amandla kaThixo makhulu njengasemhlabeni, ezulwini, umthandazo othi ukuba uthandaziwe ngothando nangomdla.
Umthandazo wenzelwe intombi enguMariya, eyiphakamisayo kwaye imbeka njengonina kaYesu, intombi eyayiyithobela iNkosi kwaye yazisa unyana weNkosi emhlabeni.
Umthandazo ophakamisa ubuqaqawuli beNkosi noYesu nguMthandazo woZuko, ocacisa amandla amakhulu kaThixo kuzo zonke izinto. Kufuneka kuthandazwe ngokholo ukudumisa uThixo.
Umthandazo wokucela ukuxolelwa kwabafileyo abangasekhoyo ngulo mthandazo, obiza igama likaYesu kwaye ucele indlela eya kwintombi enyulu ukuba ixolele imiphefumlo.
Umthandazo wokuphakamisa iNtombi uMariya, ocela inceba yakhe kuthi, bantwana bakaThixo. Siyacela ukuba asikhusele njengomama okhuselayo kwaye asikhathalele kubo bonke ububi.
Umthandazo emva kweRosari
Lo mthandazo kukuvalelisa esikwenzayo emva kokugqiba yonke inkqubo yenkolo yokufunda irosari, apho sibulela khona uThixo ngokusimamela ngalo mzuzu womanyano kunye naye kunye neNtombi Enyulu.
Ukuze ukwazi ukuthandaza iRosari, kuyafuneka ukuthobela iminyhadala ye-indulgences, oko kukuthi, ukuthandaza ishumi elinesihlanu leRosari ngokulandelelana, iimfihlakalo kufuneka zithiwe kwaye imithandazo kufuneka icengcelezwe kwaye iimfihlakalo zicingelwe. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukwazi ukuba iRosari eNgcwele ifanele ukuthandazwa ngokufanelekileyo njani.
Ngelixa ubambe umnqamlezo uphawu lomnqamlezo luyenziwa emva koko kuthethwa ngomThetho wokuTyala.
Ngexesha lokubala elikhulu lokuqala uBawo Wethu Osezulwini uyafundwa.
Kwilinye lamaso amathathu alandelayo amancani uMkhulisi uMariya uphakanyisiwe.
Uzuko luyaculwa ngaphambi kwentsimbi enkulu elandelayo.
Imfihlelo yokuqala yerosari yolo suku ibizwa ngegama kwaye kwathiwa nguBawo Wethu.
Njengoko kudlula amaso amancinci alishumi (ishumi elinye), Isichotho uMariya kuthiwa kwaye kwangaxeshanye imfihlelo icamngca ngayo.
Uzuko luyaphindwa emva kweshumi Isichotho sikaMariya. Unokuthandaza umthandazo kaFatima.
Elinye lala ma-dino alandelayo afundwa ngendlela efanayo: ukubiza igama eliyimfihlakalo, besithi uBawo Wethu, Dumisa u-Marys alishumi nozuko ngelixa ucinga ngale mfihlakalo.
Nje ukuba imfihlakalo yesihlanu igqityiwe, ivala ngokufundwa kweLitany kunye neKumkanikazi yesichotho.
Ukuba ulithandile inqaku, ndiyakumema ukuba ufunde: "Umthandazo kuJoseph oNgcwele". Ndiyazi ukuba uya kuyithanda.